blockchain प्रविधि कसरी विकास गर्छ 2018? - Blockchain समाचार
जनवरी 7, 2018 व्यवस्थापक
blockchain प्रविधि कसरी विकास गर्छ 2018?
लगभग दस वर्ष पहिले मान्छे पहिले blockchain प्रविधि बारेमा फेला. त्यस बेला देखि, विभिन्न उद्योग को प्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्रहरू यसको लागि प्रयोग पाउन यो प्रविधिको विकास अनुगमन गरिएको छ. यसबाहेक, सबैभन्दा स्थापित कम्पनीहरु जस्तै उद्यम Ethereum गठबंधन रूपमा साँठगाँठ मा मर्ज छन् (EEE), R3, र Hyperledger परियोजना, नयाँ blockchain आधारित समाधान सिर्जना गर्न. हामी blockchain को विकास मा विशेषज्ञहरु को राय साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ 2018, र जो कम्पनीहरु निकट भविष्यमा नयाँ प्रविधिको लागू योजना गर्दै.
Blockchain प्रौद्योगिकी विकास
फोर्ब्स हाकिमहरूले उम्मेदवार आकलन र रिक्तियों भर्न बाटो चौडा-लिएर निहितार्थ हुनेछ blockchain भन्छ रूपमा. मा 2018, त्यहाँ APPII समान बजार मा धेरै मञ्चहरूमा हुनेछ, जो संग प्रयोगकर्ता प्रदान “स्मार्ट” को blockchain नेटवर्कमा प्रोफाइल. मात्र यी प्रोफाइल प्रयोगकर्ता CVS समावेश हुनेछ, तर पनि आफ्नो क्यारियर merits र उपलब्धिहरू बारेमा जानकारी, प्रमाणपत्रहरू शैक्षिक कार्यक्रम र कुनै पनि अन्य अत्यावश्यक जानकारी प्रतिस्पर्धा को. यसबाहेक, शैक्षिक संस्थाहरू र कर्मचारीलाई यो जानकारी पुष्टि गर्न प्रोफाइल पहुँच हुनेछ, जसबाट यो पूर्णतया विश्वसनीय बनाउन.
आईडीसी स्वास्थ्य जाँचहरू देखि हाल रिपोर्ट - एक अनुसन्धान र परामर्श दृढ - अर्को केही वर्ष मा blockchain प्रविधि स्वास्थ्य को धेरै क्षेत्रमा प्रयोग गरिने टिप्पणी. अध्ययन “स्वास्थ्य उद्योग 2018 को विश्व पूर्वानुमान” भविष्यवाणी भनेर अर्को वर्ष द्वारा 20% संगठन को सक्रिय परियोजनाहरू blockchain विकास गरिनेछ. द्वारा 2020 blockchain परिचालन व्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने, साथै विरामीहरु को डेटाबेस कायम राख्न लागि. को Skycell कम्पनी कसरी blockchain र IoT दबाइ उद्योग एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रस्ताव एक ज्वलन्त उदाहरण हो, जो भुक्तानी समावेश, बिलिङ, र बीमा.
को Blockchain अनुसन्धान संस्थान परियोजना को नै समय सहभागीहरू मा, जो आईबीएम समावेश, Pepsi कं, र FedEx, अपेक्षा भनेर blockchain विनिर्माण र उत्पादन उद्योग लागू, बस एक प्रमुख साधन बन्न छैन, तर डिजिटल क्रान्तिको को दोस्रो पुस्ता embody हुनेछ, पहिलो इन्टरनेट को आविष्कार हुनुको साथ. फक्सकन जस्ता कम्पनीहरूले आफ्ना आपूर्ति श्रृंखला मा कारोबार निगरानी गर्न blockchain प्रयोग गर्नेछ.
LOOMIA शाऊल Lederer मा Blockchain निर्देशक विश्वास गर्छ कि 2018 हामी कसरी स्थापित कम्पनीहरु देख्ने, कि पहिले नै आफूलाई विभिन्न बजारमा प्रमाणित गर्न व्यवस्थित छन्, सार्वजनिक blockchain आधारित पायलट सेवा र उत्पादन सुरु हुनेछ.
स्थापित कम्पनीहरु वेब स्टार्टअपहरू द्वारा खपत थिए 90 को दशक मा इन्टरनेट उपेक्षा भनेर कसरी संस्थाहरु को धेरै cognizant छन्, र तिनीहरूले पनि त्यस्तै blockchain प्रविधिको आगमन संग blindsided गर्न चाहँदैनन्. तिनीहरूले या त एक blockchain प्रयोग गरिरहेका सुरु वा फिलिम को बाटो जाने गर्नुपर्छ पहिचान.
blockchain धन्यवाद, स्मार्ट अनुबंध को प्रयोग पनि परिवर्तन गर्नेछ. पछिल्लो गर्मी आईटी विशाल आईबीएम, अमेरिकी बीमा निगम एआईजी, र वित्तीय कम्पनी मानक चार्टर्ड पीएलसी blockchain आधारित को पाइलट परीक्षण पूरा “स्मार्ट” अन्तर्राष्ट्रिय बीमा नीति. पहिलो पटक blockchain र स्मार्ट अनुबंध यो उद्योग मा प्रयोग गरियो, जो अगाडी एक विशाल मात्रा मा यो परियोजना विकास हुनेछ 2018. Oliver Bussmann कि blockchain मात्र वित्तीय र बीमा क्षेत्रहरु को परिवर्तन भएको निश्चित छ तर पनि अन्य उद्योग प्रभावित हुनेछ. यस सन्दर्भमा, अर्को वर्ष धेरै कम्पनीहरु नयाँ बजार को आवश्यकताहरू पूरा गर्न आफ्नो व्यापार मोडेल अनुकूल हुनेछ.
संसार जहाँ बिचौलियों अप्रचलित हुँदै गइरहेका छन्, कम्पनीहरु Silos मा सोच रोक्न र पारिस्थितिकी मा साझेदार बन्ने वा फराकिलो प्लेटफर्ममा थप खुला हुन सिक्न हुनेछ. त्यो, बारी मा, अर्थ निर्णय तिनीहरूले के व्यापार मोडेल को प्रकार चाहनुहुन्छ - यो मंच नाटकहरु छ कि, उत्पादन नाटकहरु, omni-च्यानल रणनीति, र यति मा.
Oliver Bussmann - छैन-लागि-लाभ गुप्त उपत्यका संघ र पूर्व CIO UBS मा को अध्यक्ष - विख्यात ठूलो बैंक blockchain भुक्तानी प्रणाली रुचि हुनेछ भन्ने, किनभने उनीहरू blockchain वास्तविक समय प्रशोधन मामलामा ल्याउँछ लाभ द्वारा प्रलोभनमा, कम जोखिम प्रोफाइल, कम लागत र पारदर्शिता. को व्यापारीले पनि भन्नुभयो कि 2017, कम्पनीहरु उहाँले सक्षम blockchain कि सेवाहरूको नयाँ प्रकार थप र थप ध्यान थियो संग काम गर्न अवसर थियो, blockchain विशेष यदि IoT र ऐ संग संयुक्त. Bussman अनुसार, यो प्रवृतिमा जारी हुनेछ 2018, फोर्ब्स मा हाल रिपोर्ट साथै यसो रूपमा. blockchain को गुप्तिकरण र decentralized प्रकृति IoT मा उपकरणहरू को कहिल्यै थुप्रैले निगरानीका लागि धेरै उपयोगी छ. यसरी, रिपोर्ट खानी bitcoins लागि प्रयोग गणनाको शक्ति नयाँ पुस्ता को साइबर-डाँकुहरूको स्मार्ट घरमा रक्षा गर्न प्रयोग गर्न सकिएन भनेर टिप्पणी.
नाभिक विजन को सीईओ, अभिषेक Pitti बलियो डाटा सुरक्षा विकास मा मदत गर्नेछ जो blockchain विशेषताहरु वर्णन. उहाँले विश्वास गर्छ कि 2018, यो क्षेत्र क्रिप्टोग्राफी जस्ता प्रविधिहरू को आपसी विकास देखि सबै भन्दा महत्वपूर्ण लाभ देख्ने, गुप्तिकरण, र blockchain:
Blockchain धेरै उद्योगहरूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने एउटा शक्तिशाली उपकरण हो, र हामी देख्छन् कि गुप्तिकरण प्रविधि र क्रिप्टोग्राफी मा प्रगति, blockchain संग मिलेर, मा सुरक्षा उद्योग मा सफलता को लागि नुस्खा हुनेछ 2018. उदाहरण को रुपमा, को Equifax डाटा Hack बस यसलाई रोकियो गरेका blockchain भन्दा बढी आवश्यक कुरा हो. जबकि blockchain प्रविधि छ साँच्चै मदत ग्राहकहरु कम्पनी द्वारा स्वामित्व आफ्नै व्यक्तिगत डाटा थप नियन्त्रण ठोकुवा सक्छ, खराब सुरक्षा अभ्यासहरू तिनीहरूलाई बाँकी थियो कमजोर, वा blockchain बिना. जहाँ blockchain सुरक्षा सुविधाहरू साँच्चै आफ्नै मा आउनेछ IoT आफ्नो युग्मन हुनेछ. जडान गरिएका उपकरणहरूको एक कहिल्यै-वृद्धि नम्बर, 2018 परिष्कृत डाटा breaches देखि IoT आवेदन र प्रयोगकर्ताहरू जोगाउन blockchain सुरक्षा वास्तुकला आवश्यक हुनेछ. म कडा विश्वास छ कि 2017 के मा आउन छ लागि मात्र ट्रेलर थियो 2018 सम्पूर्ण blockchain वातावरण र क्षेत्र मार्फत.
dmitriy Zhulin, INS इकोसिस्टमका सह-संस्थापक, एक व्यापक अपनाए मुख्यधारा प्रविधि बन्न blockchain देख्न चाहनुहुन्छ 2018, वित्तीय सेवा र खुद्रा देखि उद्योग को एक सम्पूर्ण पाहुना बदलन, रसद र चिकित्सा गर्न. एकै समयमा अधिकतम Kordek मा, Lisk कम्पनी को सह-संस्थापक, हामी मा blockchain नेटवर्क प्रशासन थुप्रै विकासक्रम आशा गर्न सक्छौं कि भन्ने विश्वास गर्छ 2018, जो निर्णय सन्दर्भमा नेटवर्क अपग्रेड लागि नयाँ सहमति तंत्र र अद्यावधिक सिद्धान्तहरू समावेश गरिनेछ:
Bitcoin प्रयोगकर्ता सक्रिय सफ्ट काँटा संग (UASF), वा Lisk गरेको प्रत्यायोजित-प्रमाण-को-शूलीमा सहमति तंत्र, हामी मदत भविष्य समाधान परियोजना भावी बारेमा महत्वपूर्ण निर्णय आशा गर्न सक्छौं. scalability को मुद्दा अर्को तातो विषय मा जारी हुनेछ 2018. जब यस्तो भिषा वा मास्टरकार्ड रूपमा परम्परागत प्रतियोगिहरु द्वारा प्रस्तावित कारोबार गति तुलनामा वर्तमान blockchain रूपरेखा अझै पनि पछि ठंड छन्. उद्योग नयाँ समाधान खोज्न र जहाँ उत्तरदायित्व को प्रतिस्पर्धी स्तर हासिल गर्न सकिन्छ एक बिन्दु गर्न कोड अनुकूलन गर्न आवश्यक हुनेछ. यो कारण छ Lisk लागू sidechains किन छ. राम्रो-वितरण सञ्जाल गतिविधि सुनिश्चित र नेटवर्कमा प्रशोधन गति सुधार आवश्यक छ.
Blockchain प्रौद्योगिकी विकास 2018
क्वीन्सल्याण्ड Austr कसरी यात्रा गर्न ...
को 72 घण्टा Bitcoin चुनौती ...
Coin Staking Overview - नव, D...
BREAKING NEWS: Facebook is lau...
अघिल्लो पोस्ट:मा Cryptocurrency बजार विकास 2018
अर्को पोस्ट:सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू 2017 यस गुप्त समुदाय मा